China Waste Tire Kupwanya midziyo fekitori uye vagadziri | LYBH
Iyo tsvina tsvina yekugadzira yekugadzira tambo ndeye yakakura-chikamu chakazara seti yemidziyo iyo inonyatsopatsanura nhatu huru mbishi zvinhu zviri mune vhiri: rabha, simbi waya, uye fiber mukamuri tembiricha uye inoziva 100% kudzokorodza. Tsvina yekugadzira dhizaini yekugadzira inogona kudzokorora matairi mukati mehupamhi huwandu hwe400-3000mm zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvine simba rinoshanda, saizi yekuburitsa inogona kudzorwa mukati meyero ye5-100mm, uye kuburitsa kunogona kusvika 200-10000kg / h . Iyo yekugadzira tambo inomhanya pane tembiricha yemukati uye haizokonzere kusvibisa kwechipiri kune zvakatipoteredza. Iyo yekugadzira tambo inotora PLC yekudzora system, iri nyore kushanda nekuchengetedza, ine yakaderera simba rekushandisa uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Double-mugodhi bvudzi crusher
Iyo yakangwara maviri-axis mota shear crusher ine hunhu hwepasi kumhanya uye hombe torque, iyo inogona kupwanya marara matayi eese saizi uye kuve nechokwadi cherefu-refu kugadzikana mashandiro emidziyo. Yekucheka chishandiso chakagadzirwa neakakwira chiwanikwa simbi inotumirwa kubva kuEurope, uye chimiro cheakaviri mutsara aricheke akagadzirwa nechinogona kutsiviwa chinotsiva, icho chinovandudza mashandisirwo mwero wekucheka chishandiso. Kupwanya kwakanyanya uye kupwanya kwakanaka kunoitwa munzvimbo dzakasiyana dzinoshanda mune imwechete banga bhokisi panguva imwechete kuchengetedza simba rekushandisa uye kushandisa nzvimbo.
Kuburikidza nekufambisa banga nebanga rakatemwa kucheka gundi block, anokwanisa mabara uye tambo yesimbi kuburikidza nesefa kunze, isina kukodzera mabara uye tambo yesimbi inoenderera kugara munzvimbo inopwanya yekupwanya; Iyo hydraulic kuvhura nekuvhara mudziyo pakati pebhokisi ne Chidzitiro chinogadzirisa uye kutsiva maturusi ekucheka uye sikirini zvive nyore. Mberi uye kumashure symmetry dhizaini yekufambisa banga uye yakagadziriswa banga inogona kuona shanduko ina yekucheka mativi enzira uye nekuvandudza hupenyu hwebasa rechishandiso. Kugadziridza turu ne waya-electrode. kucheka, uye inogona kushandiswa mushure mekugadzirisa.
Iko pamusoro peiyo furemu yemidziyo kwakarapwa ne derusting, iyo inogona kusangana nezvinodzvinyirira-ngura zvekushanda kwenguva refu kwemidziyo pasi peyakakosha nharaunda senge tsvina yemarara. Iyo ine akangwara kudzora mabasa senge kure kutanga uye kumira, emergency emergency, kumhanya uye kuwandisa.
Nokushandisa musimboti wedhisiki kutenderera kupatsanura zvinhu zvemhando dzakasiyana dzekuongorora zvinhu, iro rezasi rinogona kuwanikwa nekugadzirisa mukaha wedhisiki kuti usangane nezvinodiwa pakuburitsa saizi. Iyo yepamusoro-skrini inotadza kuzadzisa zvinodikanwa ichadzoserwa kune iyo yekupwanya sisitimu yekukonzeresa-kupwanya kusvikira yasangana nezvinodiwa zvekuregedza particle saizi. Dhisiki rakagadzirwa kubva kunze kwenyika polymeric zvinhu zvinoumbwa izvo zvisiri nyore kukuvara uye zvinogona kushandiswa mune ese marudzi emamiriro akashata ekushanda. Panguva imwecheteyo, iyo inonzwisisika modular dhizaini uye inoshanduka marongero ekubata ekugadzirisa chinzvimbo, kuitira kuti izvo zvinhu zviri mukuvheneka maitiro zviite mukana wekuunganidza kana kumhanyisa, yekugadzirisa michina iri nyore uye nekukurumidza.
Mhando yemagineti eparadzanisa ndeye magineti ekuzvimiririra ekurega zvachose, ayo anogona kunyatsoongorora waya yesimbi mushure mekuparadzana.
Iyo waya yesimbi yakaparadzaniswa kubva kune hombe yerabha block / simbi waya nekudengenyeka. Iyo chete yakaisvonaka simbi waya yerabha chidimbu / poda inosangana nezvinodiwa zvinogona kupfuura nepasi pechidzitiro pasi pechidzitiro chinotetemera. Iyo mikuru mabharanzi erabhuru ayo asingakwanise kupfuura nepasefa uye waya yesimbi inotakurwa zvakare nebhandi rekutakura kuenda kune yesimbi waya separator yekupwanya yechipiri kudzamara yasvika padanho.
Iko huru yekudzora kabhodhi uye chikuva chekutonga chakazvimiririra kubva kune mumwe nemumwe. Iyo dhizaini yekubata skrini uye bhatani yekudzvinyirira modhi inoita kuti iyo yekudzoreredza interface ive yehumanized uye nyore kushandisa Otomatiki modhi inogona kuona isina mashandiro mashandiro, manyore maitiro anogona kudzora imwechete kifaa, vashandisi vanogona kusarudza akasiyana modes kuti ashande zvinoenderana chaiko anodikanwa chero nguva. Panguva imwecheteyo, iyo sisitimu zvakare ine kurira uye mwenje aramu, inoonekwa yekukanganisa chiyeuchidzo, chiyeuchidzo chekugadzirisa chiyeuchidzo uye mamwe mabasa akangwara, kuitira kuti vashandisi mukuita kwemidziyo kudzora zvirinyore uye nekukurumidza, inotsvaga nenguva uye kugadzirisa zvikanganiso, pedzisa kugadzirisa shanda. Iyo yakazara-yekuvhara vhidhiyo yekutarisa mudziyo inogona kutaurirana nepakati pekutonga system uye kuongorora mamiriro anomhanya emidziyo munguva chaiyo.
1.Modular dhizaini, diki tsoka
Iyo yekushandisa tambo inotevera chirevo chinonzwisisika uye chakasimba kushandiswa kwenyika, inotora chimiro dhizaini yemubatanidzwa weakaviri-shaft shear crusher uye rin'i roller roller, uye inonzwisisika dhizaini, iyo isingakwanise chete kuverengera kuburitsa uye kuendesa saizi inosangana neiyo zvinodiwa, asi zvakare zvinosangana nekuronga uye kuvaka zvido zvevatengi zvigadzirwa kurasa uye manejimendi.
2.Integral banga banga dhizaini, rakatsiga uye rakavimbika
Mushure mekurapa kwekupisa, iro bhokisi rekushandisa rakasimba uye rinopfeka-kuramba, izvo zvinoita kuti simba remuchina riwedzere, rinowedzera hupenyu hwebasa remidziyo, uye zvinobudirira kunoderedza mutengo wekuchengetedza.
3.Fixed banga rakazvimiririra rakasununguka, rakasimba kupfeka kuramba
Imwe neimwe yakagadziriswa cutter inogona kukatanurwa uye kuiswa zvakazvimiririra, iyo inogona kukatanurwa uye kupedzwa nekukurumidza munguva pfupi, ichideredza zvakanyanya basa revashandi nekuvandudza kuenderera kwekugadzira.
4.Unique chishandiso dhizaini, zviri nyore kuchengetedza uye kutsiva
5.High chokurukisa simba, simba kuneta nemishonga uye rova ​​kuramba
Chokurukisa chakagadzirwa nesimbi yakasimba. Mushure mekurapa kwakawanda kwekupisa uye kwepamusoro-kunyatso kugadzirisa, ine simba remuchina, yakasimba anti-kuneta uye anti-kukanganisa kugona uye hupenyu hwakareba hwebasa.
6.Imported mabheyaringi ane akawanda akasanganiswa zvisimbiso
Kupinza kubereka uye yakawanda musanganiswa chisimbiso, yakakwira mutoro kuramba, hupenyu hwakareba, isina guruva, isina mvura uye antifouling, kuverengera kuenderera uye kugadzikana kushanda kwemuchina.
d. Kusviba kwakasimba: iyo yakasimba mushure me pyrolysis ndiyo isina kuchena kabhoni nhema uye simbi waya dzinogona kuve dzakadzika-kugadziriswa kana kutengeswa
zvakananga nekukosha kwayo.
Pashure: Waste Plastic Kupwanya Zvishandiso
Zvadaro: Carbon Nhema Kukuya Midziyo
Mota Shredder Muchina
Mota Shredder Mutengo
Rabha Tire Kugadzira Crusher
Chakagadzirwa Metal Shredder Machine
Tire Shredder Mutengo
Tire Shredder Kudzokorora Mutsetse
Tire Kudzokorodza Machine Mutengo
Tire Shredder Machine Kudyara
Tire Shredder Machine Mutengo
Waste Tire Inokanganisa Machine
Waste Tire Kucheka Muchina
Waste Tire Kurasa Mari
Inoenderera Pyrolysis Miti, Batch Pyrolysis Chirimwa, Dongo Mapurasitiki Refinery, Waste Tire Kudzokorora Muchina, Plastiki Recycling Machine, Tire Pyrolysis,